Madaxweyne Xassan Sheikh oo ka hadlay Xukuumadda cusub lasoo dhisayo - Wargane News
Home Somali News Madaxweyne Xassan Sheikh oo ka hadlay Xukuumadda cusub lasoo dhisayo
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Xassan Sheikh Maxamuud ayaa Shir jaraa’id uu galabta ku qabtay xarunta madaxtooyada kaga hadlay xukuumadda cusub ee dhowaan lagu dhawaaqi doono.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xukuumadda lasoo dhisaayo ay ahaan doonto mid loo dhan yahay balse aysan dadka oo dhan kasoo muuqan doonin isagoo codsaday in lala shaqeeyo.
“Xukuumad ayaa la soo dhisi doonaa dadka oo dhan ma wada heli doonaan waxaan codsanayaa in dhamaanteena aan la shaqeyno xukuumada si dalka looga dhaqaajiyo meesha uu hadda taagan yahay isla markaana looga faa’ideysto waqtiga” ayuu yiri.
Shirkiisa jaraa’id kuma soo hadal qaadin ama la waydiinin su’aal la xiriirta walaaca ay qabaan Xildhibaanada Baarlamaanka iyo digniinta ay jeediyeen oo ku saabsan in aan lasoo celin Karin Wasiiradii hore ay diideen oo ka qayb qaatay riddida Xukuumaddihii hore, iyagoo sheegay haddii ay dhacdo in aysan siin doonin codka kalsoonida.
Warar ay Horseed Media ka heshay ilo ku dhow xafiiska Madaxweynaha ayaa sheegaya in uu doonayo in lasoo celiyo Wasiirada saaxiibadiis oo ay diideen Xildhibaanada.
Beesha Caalamka ayaa niyad jab ka muujisay muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan Hay’addaha Dowladda Federaalka oo ay ku tilmaamtay mid caqabad ku ah hiigsiga sanadka 2016 oo ay doonayaan in dalka uu ka dhaco doorashooyin xor ah iyadoo waqti uu yahay gabaabsi.
Deg Deg: Daawo Axmed Muumin Seed Oo Farriin Dheer Hawada u Mariyey Shacabka Somaliland Gaar Ahan Gobolka Aw..